क्यामेराका लागि साओमीको लाइकासँग सहकार्य, आउँदो जुलाईमा नयाँ स्मार्टफोन आउने « Tech News Nepal
२०७९, २३ असार बिहिबार |
टेलिकम समाचार अफर ट्यारिफ ब्राण्ड
ग्याजेट्स रिभ्यू प्रोफाइल स्टोरी ग्याजेट्स ब्राण्ड बजार
स्टार्टअप स्टोरी स्टार्टअप न्युज
टेक इनोभेसन अटो टेक ग्लोबल टेक नेपाली टेक एजुकेसन
क्यामेराका लागि साओमीको लाइकासँग सहकार्य, आउँदो जुलाईमा नयाँ स्मार्टफोन आउने
सोमबार, जेष्ठ ९, २०७९
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन ब्राण्ड साओमीले चर्चित जर्मनी क्यामेरा ब्याण्ड लाइकासँग सहकार्य गरेको छ । यो सँगै कम्पनीले आउँदा जुलाईमा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ ।
सम्भवतः साओमी १२ अल्ट्राको रुपमा सार्वजनिक हुने फोनमा लाइकाको क्यामेरा प्रविधि हुनेछ । जसले प्रयोगकर्तालाई हाल बजारमा उपलब्ध फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन साओमी १२ प्रोमा उपलब्ध भन्दा परिष्कृत क्यामेरा अनुभव प्रदान गर्ने जनाइएको छ । हुन त कम्पनीले लाइकासँगको सहकार्यमा आउने फोनको नाम खुलाएको छैन् ।
यसरी क्यामेराको लागि लाइकासँग सहकार्य गर्ने साओमी पहिलो कम्पनी भने होइन् । यसअघि भीमोले लाइकासँग यही खालको सम्झौता गरिसकेको छ । भने, अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड ओप्पो, वानप्लस लगाएका ब्राण्डले स्विडिस क्यामेरा निर्माता ह्यासलब्लेड सँग सहकार्य गरेका छन् ।
स्मार्टफोन कम्पनीका लागि यसरी क्यामेरा ब्राण्डसँग सहकार्य गर्नु आफूलाई बजारमा थप प्रभावकारी बनाउनु पनि हो । साओमीले पनि लाइकासँगको सहकार्यमार्फत सोही उपलब्धि हासिल गर्ने योजना बनाएको हो । यसअघि ह्वावेले लाइकासँगको सहकार्यमा फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन पी सिरिज र मेट सिरिजलाई ब्राण्डिङ गरेको थियो ।
लेइका क्यामेरा भएको पहिलो साओमी स्मार्टफोन विश्वबजारमा नआउने
काठमाडौं । साओमीले गत वर्ष क्यामेरा ब्रान्ड लेइकासँग साझेदारी गरेको थियो, जसअन्तर्गत साओमी १२ एस
साओमीको नयाँ ल्यापटप बजारमा, यस्तो छ मूल्य र फिचर
काठमाडाैं । साओमीकाे नयाँ ल्यापटप ‘साओमी बुक प्रो २०२२’ सार्वजनिक भएकाे छ । १४ र
साओमीले ल्यायो १ इन्चको सेन्सर भएको फोन, डल्बी भिजन एचडीआर भिडिओ रेकर्ड गर्न सकिने
काठमाडौं । चिनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी साओमीले आफ्नो फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ‘मी १२ एस अल्ट्रा’ सार्वजनिक
गेमिङलाई लक्षित गर्दै एसुसले ल्यायो १८ जीबी र्‍याम भएको रग फोन
काठमाडौं । एसुसले गेमिङलाई लक्षित गर्दै दुई नयाँ स्मार्टफोन ल्याएको छ । कम्पनीले रग फोन
युट्युबमा अश्लील भिडिओ राख्ने प्रवेश लामा पक्राउ
ह्वावेले नेपालमा १० दिनमै तयार पार्‍यो तीन तले मोडुलर डेटा सेन्टर
विद्युत तार भूमिगत पारेसँगै पोल पनि हटाइँदै, अब कहाँबाट दिने इन्टरनेट सेवा ?
कुन टेलिकम नेटवर्कबाट राम्राे चल्छ इन्टरनेट ? यस्ताे छ तथ्याङ्क
जर्जियाबाट नेपाली नम्बरमा फोन, के हो त वास्तविकता ?
भुलेर पनि डाउनलोड नगर्नुहोस् यी एपहरू
विश्वभर फाइभजी विस्तार हुँदा नेपालमा अझै ७ प्रतिशत जनसंख्या टुजीको पहुँचबाटै बाहिर
भारतीय सरकार विरुद्ध ट्वीटरले हाल्यो मुद्दा
तपाईंको टिकटक पोस्ट क-कसले हेरे ? यसरी थाहा पाउनुहोस्